Ụbọchị Ndị Ọrụ na Mba Ụwa: Obianọ Enyela Ndị Ọrụ Ezi Olile Anya
Gọvanọ Obianọ nke osote ya bụ dọkịnta Nkem Okeke nọchiri anya ya, mere ka a mara nke a n'ama egwuregwu Alex Ekwueme dị n'Awka ụbọchị Tuzdee gara aga, dịka ndị ọrụ steeti ahụ sonyeere ndị otu ha na mba ụwa n'imerube ya bụ oke mmemme. O kwere nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'ihu n'ime ndị ọrụ oyibo mma na steeti ahụ, ma kwuo na ọ bụ n'ihi nke ahụ ka e guzobeworo otu ga-elebà anya n'ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ na steeti ahụ.
N'ebe o doro anya, gọvanọ mere ka a mara na oge adịghị anya, na a ga-amalite itinye n'ọrụ na imezupụta ihe ndị kọmitii ahụ tụpụtasịrị dịka mpụtàrà ha, nke gụnyere ịkwalite ego a na-akwụ ndị ọrụ lagoro ezumike nka, ibunyesi ndị nọ n'ogoogo nhazi bụ 'directors' ụgbọ ala, ibulitekwu ahọ ịga ezumike nka nke ndị ọrụ nọ n'ụlọ mmụta Nwaafọ Orizu, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ha na-ezube maka ndị ọrụ oyibo steeti ahụ n'izugbe.
Na mbụ n'okwu ya, onyeisi oche otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala Nigeria, ngalaba steeti Anambra, bụ maazị Jerry Nnụbịa kelere gọvanọ Obianọ maka mbọ dị iche iche ọ gbagoro na ndị ọ ka na-agba iji kwalite ọnọdụ ndị ọrụ oyibo na steeti ahụ, ma kwuwaa hoohaa na ha na-atụ anya na ọ ga-eji oge agba ọchịchị ya nke abụọ a wee kwalite ọdịmma na ọnọdụ obibi ndụ ha n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi imirikiti nkwado ha na-enye ya.
Ọ kpọpụtara oke ọnụ ahịa inweta ụlọ obibi, na ụfọdụ ihe ndị ọzọ, dịka ihe na-echere ndị ọrụ oyibo aka mgba na steeti ahụ, ma kpọkuo gọọmenti ka o mee ngwa gbatara ha ọsọ enyemaka.
Ndị ọzọ sonyere na ya bụ mmemme gụnyere okwupụta okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu na steeti ahụ bụ ọkaiwu Rita Madụagwụ nke osote ya bụ maazị Haford Oseke nọchitere anya ya; onyeisi ọrụ na steeti ahụ, bụ ọkaiwu Harry Udu, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ selitere isi n'ọrụ gọọmenti.
Ịkwụ n'ahịrị, na ịji otu ole kwee ukwe dara ụda, bụ nke ndị ọrụ oyibo steeti ahụ mere, so n'ihe pụtakarịchara ihe na mmemme ahụ.